Xaaladda Degmada Afgooye oo dagan iyo ciidamada oo wado baaritaano – Radio Muqdisho
Waxaa haatan dagan xaalada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo saacadihii ugu danbeeyay ay ka socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleyshiyaad ka tirsan nabad diidka Al-shabaab oo weeraro gaadmo ah ku soo qaaday xarumo ay daganaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku yaal gudaha degmadaas.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, mudane Ibraahim Aadan Cali oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weeraro gaadmo ah oo nabad diidka Al-shabaab ku doonayeen in ay ku carqaladeeyaan amniga iyo wadanoolaanshaha ka jira gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxa uuna xusay in ciidamada ay haatan wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyo kala danbeynta.
Gudoomiyaha ayaa sidoo sheegay in weeraradaasi gaadmada ah ay geysteen qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka shacabka ah iyo kooxihii weerarka soo qaaday.
Ugu danbeyn gudoomiyaha ayaa tilmaaday in weerarka uu ku geeriyooday Iskuduwaha Wasaaradda Maaliyadda ee Maamulka Koofur Galbeed, Maxamuud Daahir Qooleey.
Marwada Madaxweynaha Dalka oo kaalmo lacageed gaarsiisay fanaanka Cabdi Tahliil